pfSense 2.3.4: vhezheni itsva yeakavhurika sosi firewall | Linux Vakapindwa muropa
pfSense 2.3.4: vhezheni itsva yeakavhurika sosi firewall
Isu tataura kare nezve pfSense uye mamwe akafanana masisitimu ekushandisa firewall masystem kupa imwe yekuwedzera chengetedzo kune ako maratidziro, uye zvese zvemahara uye nerudzi urwu rweakavhurika sosi mhinduro. Iyo inoshanda sisitimu inoenderana neshanduro yazvino yeFreeBSD sisitimu inoshanda. Muizvi nyowani vhezheni pfSense 2.3.4 kuvandudzwa kwakawanda kwakaitwa kwatichaona izvozvi.
Iti pane zvimwe zvinotsiva pfSense, kunge IPCopMune ino yeiyi, iyo yakafanana chaizvo sisitimu asi yakavakirwa paLinux. Ose ari maviri akanaka uye ane akafanana maitiro, uye zvakareruka uye inonzwisisika webhu interface kubva kwaunogadzira yakakodzera marongero. Unogona kuiisa senge sisitimu pane chero komputa pane yako network kuti uchengetedze kana kusefa traffic kune mamwe madhivha akabatana.
Shanduko dzinoverengeka dzakabatanidzwa mune nyowani yekuchengetedza kuburitswa kweyakagadzikana 2.3.x bazi re pfSense mushure memwedzi miviri yekusimudzira kubva pakaburitswa yekupedzisira, vhezheni 2.3.4. Pakati nhau, kugadzikana kwesystem kwakagadziridzwa uye zvimwe zvipembenene zvakabviswa. Zvidziviriro zvekuchengetedza zvakaitwawo uye ivo havana kukanganwa kuwedzera matsva mashandiro. Uyezve, iyo yakavakirwa paFreeBSD 10.3-Kuburitsa-p19 vhezheni yeakakurumbira Beastie OS.
Pakati pe zvinhu zvakagadziridzwa Iwo akakomberedzwa kuita vhezheni 7.54.0, ntpd 4.2.8p10_2, uye mamwe mapakeji. Iyo Dashibhodhi yakagadziridzwa zvakare, shanduko kune iyo GUI muGoogle Chrome 58 uye Mozilla Firefox 48 mabhurawuza, uye mamwe ma tweaks (onawo Netgate Unique ID, inozivisa serial nhamba yevashandisi vanotenga yakabhadharwa masevhisi). Ichi ID chinotsigirwa nemasevhisi emakore akadai seMicrosoft Azure uye zvakare AWS (Amazon Web Service).
Kana iwe uchifarira kurodha pasi, unogona kuzviita kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » pfSense 2.3.4: vhezheni itsva yeakavhurika sosi firewall
Ini ndatoishandisa kwemakore mashanu, zvakanaka kwazvo kuitazve
kwaziso uye chero mibvunzo kubasa kwako
Pindura kuna ernest
Debian 8.8, vhezheni itsva uye kumwe kuchengeteka